के सामान्य रुघा -खोकीले कोरोनाबाट बचाउँछ त ? यस्तो तथ्य सार्वजनिक – ramechhapkhabar.com
के सामान्य रुघा -खोकीले कोरोनाबाट बचाउँछ त ? यस्तो तथ्य सार्वजनिक
सामान्य रुघा–खोकीको भाइरसले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन सक्ने कुराको खुलासा भएको छ । यो खुलासा बेलायतको स्कटल्याण्डस्थित ग्लास्गो यूनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले गरेका हुन् । उनीहरुका अनुसार सामान्य रुघा–खोकी गराउने भाइरस अर्थात राइनो भाइरसले कोरोना भाइरसलाई आफ्नो प्रतिरुप अर्थात रेप्लिकेशन बन्नबाट रोक्दछ ।
यसका लागि राइनो भाइरसले शरीरको इम्यून सिसटमलाई एउटा विशेष प्रकारको सन्देश दिन्छ, त्यसपछि इम्यून सिस्टमले कोभिड–१९ लाई थप भाइरस बनाउनबाट रोक्दछ । ग्लास्गो यूनिभर्सिटीको सेन्टर फर भाइरस रिसर्चका वैज्ञानिकहरुले यो दावी गरेका हुन् । यो नयाँ अध्ययनलाई जर्नल अफ इन्फेक्शियस डिजीजमा प्रकाशित गरिएको छ ।
उक्त अध्ययनमा स्पष्ट रुपमा के दावी गरिएको छ भने सामान्य रुघा–खोकी गराउने भाइरस अर्थात राइनो भाइरसले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्नका लागि सहयोगी सावित हुन्छ । सम्पूर्ण विश्वलाई थाहा भएको कु्रा के छ भने जति पनि मानिसहरुलाई सामान्य रुघा–खोकी लाग्छ, त्यसमा ४० प्रतिशत मानिसहरुमा राइनो भाइरसकै संक्रमण हुन्छ ।
रुघा–खोकी धेरै दिनसम्म रहँदैन । यद्यपि, जब मानिसको शरीरमा एउटा भाइरस पहिलादेखि नै उपस्थित हुन्छ, त्यो बेला अर्को भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नका लागि पहिलो त्यो संग पनि संघर्ष गर्नु पर्छ । अर्थात, शरीरमा त्यही रहने छ, जसले जित्दछ । अर्थात चार्ल्स डार्विनको सर्भाइभल अफ फिटेस्टको सिद्धान्त यहाँनिर लागू हुन्छ । केही भाइरस त्यस्ता पनि हुन्छन्, जो आफूजस्तै भाइरससहित मानिसको शरीरमा बसिरहन्छन् ।
जस्तो–एडिनो भाइरस कुनै पनि अन्य भाइरससंगै शरीरमा रहन सक्छ । तर, सामान्य रुघा–खोकीको भाइरस एक्लै युद्धको मैदानमा रहन चाहन्छ । यो भाइरस मानिसको शरीरमा एक्लै प्रवेश गर्छ र शरीर भित्र पनि एक्लै रहन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै अन्य भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने कोशिस गर्छ भने शरीर भित्रै अन्तरयुद्ध प्रारम्भ हुन्छ ।
यही जानकारीको सहयोगले ग्लास्गो यूनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले मानिसको श्वास नली अर्थात रेस्पिरेटरी ट्रयाक्टको प्रतिकृति बनाए । त्यसपछि त्यसमा कोरोना भाइरस तथा रुघा–खोकी पैदा गर्ने राइनो भाइरसलाई एक साथ छाडि दिए, ताकि ती दुबै मिलेर संक्रमण फैलाउन सकून ।
साथै, वैज्ञानिकहरुले तिनीहरुको गतिविधिहरुमा समेत नजर राखे । राइनोभाइरसले कोरोना भाइरसलाई रेस्पिरेटरी ट्रयाक्टको कोशिका भित्र आउन नदिएको देखेर वैज्ञानिकहरु आश्चर्यमा परेका छन् । तिनले कोरोना भाइरसलाई बाहिर नै राखिरह्यो । यसको अर्थ जबसम्म सामान्य रुघा–खोकीका राइनो भाइरस शरीर भित्र रहन्छ, तबसम्म कोरोना भाइरस शरीरमा पूर्ण रुपले प्रवेश गर्न सक्दैन ।
यद्यपि यो अध्ययनले भविष्मा के हुन्छ भन्ने बताएको छैन । २४ घण्टासम्म राइनो भाइरसको संक्रमण बलियो भएर रह्यो, तबसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण हुने खतरा हुँदैन ।
यो अध्ययन गर्ने प्रोफेसर पाब्लो मुर्सिया भन्छन् –‘राइनो भाइरसले मानिसको शरीर भित्र त्यस्तो रोग प्रतिरोधक क्षमताको विकास गर्छ, जसका कारण रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल अर्थात श्वास प्रश्वास तन्त्रको बाहिरी कोशिकाहरुले कोरोना भाइरसलाई प्रतिकृति बनाउनबाट रोक्छ । यसको अर्थ यदि कुनै सामान्य रुघा– खोकि छ भने त्यो व्यक्तिलाई कोरोनाबाट बच्ने मौका प्राप्त हुन्छ । तर केही समयका लागि मात्र ।’
प्रोफेसुर पाब्लो मुर्सिया राइनो भाइरसका कारणले कोरोना भाइरस तिव्र गतिमा भइरहेको संक्रमण र गम्भीरतालाई कम गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ राइनो भाइरसका कारण कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन । राइनो भाइरसले केही समयका लागि कोरोना भाइरसबाट राहत प्रदान गर्न सक्छ ।
यसले लामो समयसम्म कोरोना भाइरसबाट बचाउन भने सक्दैन । राइनो भाइरसको कारणले विकसित भएको प्रतिरोधक क्षमता केहि दिनमा कमजोर पर्न थाल्छ । त्यसपछि कोरोना भाइरसले शरीरमा हमला गर्न सक्छ । तर, जब यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्नु हुन्छ, जब रुघा–खोकि ठीक हुन्छ तब कोरोना भाइरसको खोप लगाउनु पर्छ । यसबाट भाइरसको खतराबाट बच्न सकिन्छ ।